Boat Tours Hornjack, Niagara Falls - Guide Visitors
Tavoahangy mpandeha an-dranomasina, Niagara, Kanada
Ny fampandehanana ny toetr'andro no fomba tsara indrindra ahafahana mameno ny onja Niagara Falls:
Birao Niagara Falls / Hornblower Tour | Niagara Falls Tour avy any Toronto | Niagara-on-ny-Lake
Ny zavatra malaza indrindra atao any amin'ny Riandranon'i Niagara , ankoatry ny fandehanana an-tsambo dia ny lakandranon'i Hornblower izay mitaona ny mpandeha ho any amin'ny zavona sy ny volon'ireo volkano.
* Fanamarihana * Ny fitsangatsanganana an-dalamby mankany amin'ny sambo Boat Tour dia nisolo ny " Maid of the Mist" ho toy ny mpitaingina fiara fitaterana an-dalamby teny Kanadiana ho an'ny Riandranon'i Niagara.
Mbola mitazam-pifamoivoizana any amin'ny faritra amerikana ao amin'ny Riandranon'i Niagara ny tompo mpitranga.
Inona no atao hoe Hornblower?
Ny Hornblower Niagara Cruises dia nisolo ny "Maid of the Mist" ho mpitaingin-tsoavaly eo amin'ny faritra Kanadianina ao Niagara Falls tamin'ny taona 2014.
Ny lakandranon'i Niagara Cruises dia manolotra sambokely anankiroa izay miasa hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva: Ny voalohany dia ny Dia Travel to the Falls ary ny faharoa dia ny Cruise Evening izay ahafahan'ny mpandeha fialam-boly na riandrano manaitra amin'ny alina.
Ny fitsangatsangan'ny Hornblower mankany amin'ny Falls dia 20 minitra mandeha amin'ny sambokely roa-decker izay mitondra anao any amin'ny lemak'i Niagara ary manakaiky ny Riandranon'i Niagara - na ny Ranomasina Amerikanina sy ny Kanonta Kanadiana - mba hahafahanao mahatsapa ilay ranomandry ary mahazo fahatsapana ny herin'ny rano. .
Mijanona ny sambony ary mihazakazaka eo am-pototry ny Riandranomasina, 52 metatra eo ambanin'ny lembalemba.
Aoka ho vonona ny handoitra; Soa ihany, ny orana an-dalana ponchos dia tonga miaraka amin'ny fidirana.
Aiza no ahitako ny lakolosy fantson-dranomandry?
Nandeha sambo avy any Kanadiana ny Riandranon'i Niagara, teo am-pototry ny Clifton Hill, ny sambon-danitra.
Ny Maid of the Mist dia ny fitsidihan'ny sambo izay manomboka any amin'ny ilany Etazonia.
Rahoviana ianao no miasa?
Miankina amin'ny toetry ny toetr'andro, ny fitsangatsanganana an-dranomandry dia manelanelana ny Aprily sy Oktobra. Amin'ny 2017, ny Hornblower dia hanomboka aloha kokoa noho ny teo aloha ny 1 Aprily. Tsy misy vazivazy!
Ny fitsangatsanganan-tsambo ny lakandrano dia mandao ny 15 - 20 mins eo anelanelan'ny 7:45 sy 4:45 ka hatramin'ny 7.45 hariva, arakaraka ny vanim-potoana.
Jereo ny tranokalan'ny Hornblower amin'ny fotoana manokana sy ny fisintonana vaovao.
Ahoana no hahazoako mividy tapakila amin'ny tavoahangy sy ny vola be?
Ny tapakila amin'ny Hornblower dia afaka eo an-tongotr'i Clifton Hill eo am-baravaran'ny lapan-dalamby. Ny fidirana ao amin'ny Tandroka ihany koa dia azo alaina amin'ny ampahany amin'ny fitarihana maromaro hita ao amin'ny Viator Niagara Falls izay mety ahitana ny fitaterana avy any Toronto, fiaramanidina helikoptera, ary ny fanatanjahan-tena hafa.
Ny vidin'ny fidirana dia afaka $ 25.95 ho an'ny olon-dehibe, $ 15.95 ho an'ireo ankizy 5-12 taona ary afaka amin'ny ankizy 4 sy ambanin'ny (vidiny amin'ny 2017) . Ny vidin'ny hafa dia azo ampiharina amin'ny vondrona sy ny fitsangatsanganana.
Ny vidin-tsakafo ho an'ny fanamafisana ny alina sy ny fialan-tsasatra dia $ 10 eo ho eo.
Ny vola US dia ekena ao amin'ny kihon-tantaran'ny Hornblower tapakila ary mety.
Mividiana tapakila an-tserasera alohan'ny fitsidihanao dia azo atao tsara indrindra amin'ny faran'ny herinandro.
Azo atao ve ny mihazakazaka ho an'ny kamboty sy riokely?
Eny, ny faritra rehetra ao amin'ny Tournoi Hornblower dia seza misy kodiarana sy kodiarana.
Ny ray aman-dreny dia afaka mamela kodiarana eny amoron-drano alohan'ny hidirana ao amin'ny Hornblower raha tiany.
Fiarandalamby ho an'ny tandroka:
Ny fiara fitaterana dia hita any amin'ny faran'ny atsimon'ny faritry ny sehatry ny rano ao akaikin'i McLeod Road, izay mandeha 10 minitra mankany amin'ny Maid of the Mist.
Lehibe goavana ny faran'ny Robinson Street (jereo ny torolàlana ho an'ity fiara ity).
Ny vorona aviavy dia manodina ny làlana tokony ho $ 3 isaky ny ora (amin'ny 2017).
Ny fiara ao amin'ny Butterfly Conservatory dia maimaim-poana, fa iray minitra haingana. Avy amin'ny Conservatory Butterfly , alaivo ny People Mover, izay hitondra anao amin'ny toerana mahatalanjona ao Niagara isan'andro ho an'ny sara
Read about Niagara Falls: Niagara Falls Attractions , Niagara-on-Lake , Niagara Falls Hotels
Boky fitarihana an'i Niagara Falls miaraka amin'i Viator.
Torohevitra ho an'ny fitsidihana ny Great Wolf Lodge Niagara Falls - Great Wolf Lodge Visitor Tips
New Orleans Street Frenchmen
Ny teny grika sy lovantsofin'i "Kefi"
8 Tsy maintsy mijery ny oniversite mozika
10 Torohevitra Travel Venice natao hamonjena fotoana sy vola
Ny dikan'ny teny grika hoe Kalo Mena na Kalimena
Andron'ny asa fanaovan-gazety any Baltimore
Top 15 Attractions in Northern Virginia
Fotoam-piravoravoana ao Detroit: Filma sy Mozika eo ambanin'ny kintana